mini ကို လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > mini ကို လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
mini ကို လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး mတွင်i ကို လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော သို့ ဖြစ် တည်ရှိသည် တွင် သေးငယ်သော နေရာများ နှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmper ။ နှင့် မြင့်သော positionတွင်g ဟုတ်မှန်ရေး နှင့် ကျစ်လစ်သော ဆောက်လုပ်ရေး, အ AOX-R ကို ကို စီးရီး mတွင်i ကို လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtions,it လိမ့်မည် အပြည့်အဝ တှေ့ဆုံ သင့်ရဲ့ တွင်quiry,We ကြည့်ရှု ဘို့wတစ်ဦးrd သို့ ဖြစ်comတွင်g သင့်ရဲ့ quတစ်ဦးlity ကုန်သွင်းသူ တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
20 ~ 200 S ကtimeï¼ switching
ambient temperatureï¼-20â ~ + 70â
ထိန်းချုပ်ရေးmethodï¼တွင်-off / Module အမျိုးအစား / Intelligent အမျိုးအစား
Voltageï¼ AC110 ~ 265V, AC380V, AC / DC 24V Multi ဗို့ input ကို
1. Compact ဒီဇိုင်း: အသေးစား, အလင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း, မြင့်မားသော torque နှင့်အမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ် option ကိုသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။
2. Multi-ဗို့: AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတစ်ပုံ၏ဗို့အားလျှပ်စစ် actuator turn 220VAC, 380VAC, 110VAC နှင့် 24VDC နိုင်ပါတယ်။
3. အပြည့်အဝရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာပူးတွဲ: AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတစ်ပုံ၏မော်တာလျှပ်စစ် actuator လှည့်အမြင့်ဆုံးစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်။
4. နယူးစက်မှုအနေအထားကိုညွှန်ပြချက်: အပြင်ပအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏သစ်တံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတွေ့ကြံလိုအပ်ချက်နှင့်ရေကိုရှောင်ကြဉ်။
အဆိုပါ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတစ်ပုံ module ကိုပြောင်းလဲပစ်လျှပ်စစ် actuator turn အားနည်းလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ် power supply မတည်မငြိမ်လယ်ကွင်းဗို့ကြောင့် module ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်, ပြင်ပ installation ကိုချမှတ်။ အရည်အသွေး။ မည်သည့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုတုန်ခါမှုအခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်သေချာဖို့ module ကို fix
AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတစ်ပုံ၏ Anti-သွန်းခွံမာသီးလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်တိကျမှု positioning ကိုသေချာစေရန်ပင်ခိုင်ခံ့သောလယ်တုန်ခါမှုအောက်မှာဖြည်ထားရှိမည်နိုင်ပါသည်။
AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ကျယ်ပြန့်ဒါထွက်ရေကုသမှု, HVAC, ရေနံ, ဓာတု, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘော, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့်တူသောလယ်ကွင်းမှလျှောက်ထားနေကြပါတယ်။
အမိန့် actuators ၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်နှင့်လယ်ပြင်အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းလျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့ positioning ကိုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြန်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတပုံအလှည့်များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်သေချာစေရန်တစ်ဦး actuator စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်စင်တာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် ချောထုတ်ကုန်ကုန်ကြမ်းကနေလျှပ်စစ် actuator ။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်, အထူးသဖြင့် AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာ, ဂျာမနီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH အတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် မလေးရှား ASIA မှရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: သင် manufactory သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပါသလား?
ဖြေကျနော်တို့ Manufactory, Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်အတွက်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့အ actuator အတွက်တရုတ်အထူးပြုနေကြသည်။
တစ်ဦးက: အခုငါတို့သည်လည်း ATEX, SIL အခြားထုတ်ကုန်များအတွက် EAC လက်မှတ်လျှပ်စစ် actuator turn AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတပုံများအတွက်အီး, gost, EAC လက်မှတ်ရတယ်, နှင့်ကြပြီ။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရနိုင်မလား?
ဖြေသေချာတာပေါ့။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်စတစ်ကာအားဖြင့်လျှပ်စစ် actuator turn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကိုလေးပုံတပုံပေါ်မှာပုံနှိပ်နိုငျသညျ။
hot Tags:: mini ကို လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်